Waxaad ugu dhakhsaha badan awoodi doontaa inaad dib u nooleeyaan maalmaha ammaanta ciyaaraha on Boy Game ee iyadoo la kaashanayo Smart Boy. Shirkadda gaare siyaada Video kulan 'Hyperkin abuuraya durugsan loo yaqaan Boy cusub Smart in ay noqon doontaa ah ku darto si aad u iPhone 6 Plus oo awood u siin doona in aad u ciyaaro rasaasta Game Boy.
Si ka duwan dhowr xaaladood oo kale iPhone laga helo suuqa in aad smartphone muuqdaan sida Boy Game ah, Smart Boy dhab ahaantii aad telefoon beddeli doonaa version ku shaqeeya oo Game Boy la qaadi karo ee mid taariikhi ah oo ay Nintendo. Tani waxay wax ka beddeli doonaa waayo-aragnimo ciyaaraha oo ka mid ah 90-ka sida aad u awoodi doonin inuu ciyaaro aad kulan classic jecel on a screen xal sare oo aan ka kaaftoomi iibsan baytariyada maalin kasta soo socda.
Inkastoo Smart Boy ayaa qayb ka mid ah sirdoonka cusub ee kaftan Maalinta April Nacasyadu ', on March 31, 2015 Hyperkin ay bogga rasmiga ah Facebook ku dhawaaqay socda durugsan, Smart Boy, oo u oggolaan lahaa in aad u ciyaaro ee classic 80 iyo 90 ee kulan on iPhone 6, iyagoo u beddelaya galay Game Boy si buuxda u shaqaysa.
Cabir danta muhiim ah in sida wax soo saarka, shirkadda ku dhawaaqday in ay si dhab ah u heli doonaan arrinkaas ku saabsan horumarinta this. 1-dii Abriil, Hyperkin mar kale posted on Facebook ee ay page ku yidhi, "Dad badan oo idinka mid ah ayaa la isla dhexmarayay in Boy ee Smart waa kaftan April Nacasyadu 'ah. Waa hagaag, waxaa sort of 'ahaa'. Waxaan 'xaday' waa iyada oo ujeedadu hore ee suuqa jirrabaya, Maxaa yeelay, haddii aan waa inay noqdaan wax dhab ahaantii waxaan ka dhigi lahaa, ku hoos gambanaya arimo nacasyada April ah 'kaftan. "Dheeraad ah ay u mahad celiyay daawadayaasha loogu taageero xamaasad leh, iyo xaqiijiyay in Smart Boy ka yar yahay horumarinta. Sida laga soo xigtay saraakiisha shirkadda, Smart Boy waxaa markii hore la sameeyey iPhone 6 Plus. Si kastaba ha ahaatee waxaa jiri lahaa casriga ah ka sii socon in ay raacaan mustaqbalka. Muraaqooda ee 90 ayaa lagu soo bandhigay lahaa socda bandhigista rasmiga ah ee Smart Boy.
Dhammaan nooc oo Game Boy
Waxaa jiray laba qoys oo ka mid ah Game Boy in la sii daayay ay Nintendo, mid kasta oo taxane ah oo kala duwan oo ah nidaamka ciyaaraha Game Boy. Qoyska ayaa hore waxaa la odhan jiray Game Boy la 4 gaymamka kala duwan. The 118,69 milyan oo unug oo Game qoyska Boy la iibiyey ee dunida oo dhan. Later, qoys kale ee Game Boy la soo bandhigay yaqaan Game Boy Advance. The 81,51 milyan oo unug oo ka mid ah 3 consoles'ka qoladan taraysaa Nintendo ka weyn.
Top 5 Games ee Game Boy oo ay Alternative macruufka Apps
Ayaa kulan Game Boy iyo Game Boy Advance ahaayeen mid ka mid ah gaymamka ayaa ugu fiican. Waxay ahaayeen guriga si ay kulan classic iyo canbaha dhigay ilaa taariikhda. Iyada oo la baabiiyo ee gaymamka Game Boy, baahida loo qabo in barnaamijyadooda kale oo ka kacay mid ah kuwii doonayay inay u samray oo waayo-aragnimo ah ciyaaraha isla. Liiska sare 5 kulan oo Game Boy iyo barnaamijyadooda macruufka kale waxaa la siiyaa hoos ku qoran:
# 1. Super Mario iyo Super Mario Bros
Super Mario iyo Mario Super Bros. waa buugaasi waa in ciyaarta Arcade ee Mario Bros. Tani waxay ahayd mid ka mid ah ugu iibinta kulan video ee jeer oo dhan iyo inta badan mas'uul ka ahaa guusha Nintendo Entertainment Systems. Ra'yiururinta ayaa IGN ayaa sheegay in Super Mario inuu yahay 'Game ugu weyn ee dhan Time "oo loo arko inay dhagaxa resurrecting ee American suuqa ciyaarta video burburtay. Macna ma laha inta badan labaatan sano mari tan iyo markii la sii daayo ee ciyaarta, Mario mar walba ku qaban doonaa meel gaar ah ee aanu arintii 'wadnaha.
Ka dib markii la baabiiyo ee taxanaha Mario ah, isagana ka xiisooday ay ciyaarta Arcade jecel. Si aad u way harraad beelaan, kale kulanka macruufka la bilaabay yaqaan 'Bean Dreams.' Kulankaan ayaa waxa uu inta badan hal-abuurka ah in Mario miiska la soo saaray. Tayada music iyo video waxay leedahay Nintendo-style racfaan u faraxsan farshaxanka, waxa uu.
Pokemon waa mid ka mid ah kulamada ugu cadcad ee waqtiga oo dhan ayaa ka tagay saameyn weligiis ah in fikirka isagana ka. The mimicker ugu fiican Pokemon hadda ay Gordhaw Kadhoofaan madal waa Micromon. Kulankaan ayaa inta badan dhamaan tayooyinka ee ciyaarta Pokemon asalka ah. Muuqaallada cartoon-mid ah, orod wareeg ah deeganada grassy in search of wuxuush si ay ula dagaalamaan iyo ururinta 'Pokeballs' yihiin qaababka ka dhigi Micromon mid ka mid ah oo kale macruufka ugu wanaagsan ee Pokemon.
Oceanhorn waa ka duwan oo macruufka ee ciyaarta Tacaddi The Legend of Zelda. Waxa ay noqon doontaa habboon in la sheego in Oceanhorn waa ka badan ama ka yar inay isku The Legend of Zelda dhinac kasta marka laga reebo magaca. Muuqaalada cartoon-sida iyo sheeko la mid ah Badda Kiinteistö biimayn ku siinayaa waayo-aragnimo la mid ah ciyaaraha in aad mar haystay intuu ciyaaro The Legend of Zelda ee Game Boy.
Soo jiidashada ee Mario kart la soo celiyo oo la hordhaca ah ee ay ka duwan app macruufka loo yaqaan The Racing Beach buggy. Waxaad waxaa la siiyaa hubka isku mid ah si isku ciyaartid dadka kaa soo horjeeda ee ay, noocyo kala duwan oo wanaagsan oo upgradable 'Buggys' (kuwaas oo loo yaqaan 'Karts ee ciyaarta asalka ah), oo iska tuur la yaab leh jilayaasha. Inkastoo, ayaa Beach buggy Racing ma laha doorasho ciyaaraha multiplayer, waa waa-leeyihiin oo dhan taageerayaasha Mario kart. Qaybta ugu fiican ee kulankaan waa in lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah.
Toosinta Mars waa waa-kulan kuwa ay weli muraaqooda ee la baabiiyo ay ciyaarta dayax gacmeed jecel, Metroid. Tooso Mars ayaa diyaar u ah arrimo madal oo uu leeyahay goob la mid ah oo qaadanaya gacanta cilmiga ah kuwaas oo u xil saaran beerida deegaanka ee Mars.
Siyaabaha la isu soo celi iPhone 6 Boy Game ah
Ka sokow sugaya Hyperkin in aan bilowno ay qalab Boy Smart oo sahli doonto in aad si loogu badalo aad iPhone 6 Plus galay Boy Game ah, waxaa jira siyaabo kale u ciyaaro kulan Game Boy on your smartphone. Habka ugu badan oo wax ku ool ah ayaa ku rakibaysa emulator ah ee aad taleefan oo awood aad u ciyaaro aad kulan jecel Game Boy.
Labada emulators hogaanka u iPhone waxaa lagu qeexay hoos ku qoran:
GBA4iOS waa Game Boy Advance Emulator in loo abuuray by sameeysa macruufka ah Riley Testut. Emulator ayaa awood kuu siinayaa in lagu dheelo ciyaaraha Game Boy Color iyo Game Boy Advance ku saabsan qalabka macruufka aan JAILBREAK. Version ugu dambaysay ee emulator tani waa 2.1 taageera macruufka 8.1 iyo 8.2 qoraalkii iyo weliba. App ma laga heli karaa ee Apple ayaa App Store oo sidaas daraaddeed waa in aad isticmaasho Safari web browser si aad u dejisan barnaamijka.
Si aad u billowdo ciyaaro Game Boy kulan la isticmaalayo emulator this:
1. Open Safari aad iPhone oo geli link siiyey in bar cinwaanka: http://iemulators.com/
2. Bogga website-ka, ka jaftaa tab Apps ah.
3. Laga bilaabo doorashada la heli karo, hoos si ay u helaan emulator GBA4iOS ah.
4. Marka uu ku yaalaa, ka jaftaa icon in la furo bogga ugu weyn ee emulator ah.
5. Download iyo rakibi codsiga ku saabsan telefoonka ee xunbo badhanka rakib ka hoose ee page furay.
6. Marka lagu rakibay, furo app ee xunbo icon ee emulator ka screen guriga aad iPhone.
7. Tubada badhanka 'Plus "ee ka dhinaca kore ee midig ee shaashada ugu weyn ee ay u bilowdo web browser in-app iyo inaad kala soo baxdo ciyaarta in aad rabto in aad ka ciyaaro.
8. Marka nidaamka download dhameystiray oo ciyaarta si toos ah u soo muuqdaa uu furmo suuqa, waxaad bilaabi kartaa ciyaaro sida caadiga ah. Fiiro gaar ah: Haddii aad wax dhibaato ah kala kulmi halka rakibidda app ah, waxaad tagi kartaa iyada oo gole la kaashanayo. Si aad u furato golaha, ka jaftaa tab Gacansiinta bogga internet-ka ee website-ka (la heli karo ee soo socota si ay u tab Apps ah).
Gearboy waa emulator Nintendo Game Boy iyo Game Boy Color ah waxa ku qoran C ++. The sameeysa ciyaarta indie, Ignacio Sanchez horumariyo emulator la Ujeeda ugu weyn ee isagoo akhriska ee code isha la waafaqsan sare. Gearboy taageeraa oo dhan versions of qalabka macruufka (oo ay ku jiraan iPhone 5 iyo qalab kale oo qaybta dambe u suurta).
Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee emulator Gearboy waa in ay si toos ah u badbaadiyay horumarkaaga mar walba oo aad u kala bedesho kulan, ama marka aad jir- ka tago kulan. Sidaas aadan lumin horumarka aad kulan ee u dhexeeya. Version macruufka ee Gearboy waxaa laga heli karaa qalabka JAILBREAK iyo non-JAILBREAK labadaba.
Si aad u billowdo ciyaaro iyadoo la isticmaalayo emulator Gearboy ah:
1. Fur Safari web browser aad iPhone oo geli link siiyey in bar cinwaanka: http://iemulators.com/
2. Tubada tab Apps ka bogga hore ee website-ka.
3. Scroll hoos u hesho fursada u Gearboy hormariyo si aad u furto.
4. Bogga furay of emulator Gearboy ah, ka jaftaa badhanka rakib ka hoose ee bogga.
5. Marka lagu rakibay, ugu rogto iyada oo aad screen guriga aad iPhone in ay helaan icon ee emulator Gearboy ah.
6. Tubada icon in la furo codsiga.
7. Waxaad bilaabi kartaa ciyaaro marka aad ka browser in-app internetka ee emulator ka soo bixi kulamada la doonayo.
> Resource > Game > leexo iPhone 6 a Working Game Boy